Ubutofotofo be-2BR, imizuzu ukusuka eKhan MKT
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBoBo Stays
UBoBo Stays yi-Superhost
Le yindlu ene-2 BR epheleleyo kufutshane nemarike yeKhan kunye nesango laseIndiya. Ifikeleleka lula yiMetro kunye no-Uber le ndawo ikufuphi nepaki epholileyo kunye nemarike.
Indawo iza ixhotyiswe ngokupheleleyo ngekhitshi elisetwe ngokupheleleyo, imicrowave, ifriji, iwasha, isomisi seenwele, umabonakude wentambo kuwo omabini amagumbi okulala, iWIFI kwaye inelifti.
Nceda ufunde uphononongo lwethu ngombono ongakhethi cala wendawo yethu.
Indawo ibonakala kwimifanekiso. Nceda ufunde uphononongo lwethu ukuze ufumane ulwazi olungcono. Nceda ujonge ezinye izintlu zethu ukubona ipotifoliyo yethu yonke yeendawo ezikhoyo.
Le yindawo yokuhlala entle kakhulu enoxolo kwaye izolile ineepaki ezi-2 kumgama wokuhamba. Ubumelwane bufikeleleka lula nge-UBER, AUTO okanye iMetro. Iiteksi ziya kukuwisa kwinqanaba lomnyango kwaye emva koko kukho ilifti. Zininzi iindawo zokutyela, iivenkile eziluncedo kunye neevenkile zotywala kufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- BoBo Stays
Unxibelelwano lwesitayile sosapho kuzo zonke iimfuno zakho ngaphandle kweendleko ezifihlakeleyo. Ayiyondawo yakho yokuhlala yesiqhelo, likhaya lakho. Ngaphandle kokuhlala ngokwako ndonwabile ukukunceda ngayo nayiphi na enye into efana nezindululo kwindawo yokutyela, amatikiti, ukuqeshwa kwemoto, iingcebiso zohambo olungcono, ulwazi lwendawo yasekhaya njl.njl nawe ngayo nantoni na endinokuyenza.
Unxibelelwano lwesitayile sosapho kuzo zonke iimfuno zakho ngaphandle kweendleko ezifihlakeleyo. Ayiyondawo yakho yokuhlala yesiqhelo, likhaya lakho. Ngaphandle kokuhlala ngokwako…